Alahady 27/12/2015 : Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady 27/12/2015 : Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky voalohan’i Samoela (1 Sam 1, 20-22. 24-28)
Nentin-dray aman-dreniny tao an-Tranon’ny Tompo i Samoela kely.
Tamin’izany andro izany i Elkanà dia nahalala an’i Anà vadiny, ary ny Tompo nahatsiaro azy. Ary nony nitsingerina ny andro, dia efa nanana anaka i Anà ka dia tera-dahy izy, ary nataony hoe Samoela ny anarany, fa nangatahiko tamin’ny Tompo, hoy izy.
Dia niakatra i Elkanà vadiny sy ny ankohonany rehetra hanatitra amin’ny Tompo ny sorona fanao isan-taona, sy hanefa ny voadiny. Tsy mba niakatra anefa i Anà, fa hoy izy tamin’ny lahy: “Rehefa hitsaha-nono ny zaza dia hoentiko hiseho eo anatrehan’ny Tompo sy hitoetra eo mandrakizay.”
Nony efa notazany ny zaza, dia nentiny niakatra niaraka taminy, sady naka vantotr’ombilahy telo, sy lafarinina iray efah, ary divay eran’ny siny hoditra izy, dia nentiny nankao an-Tranon’ny Tompo tao Silô izy. Mbola tanora kely ny zaza. Dia novonoin’izy ireo ny vantotr’ombilahy iray, ary nentiny nankao amin’i Helì ny zaza. Ka hoy i Anà: “Aza mahafady, Tompoko, raha velona koa ny ainao, Tompoko, dia izaho ilay vehivavy nitoetra teto akaikinao nivavaka tamin’ny Tompo. Ny hahazoako ity zaza ity no nangatahiko ary neken’ny Tompo ny fangatahana nataoko taminy. Koa inty kosa aho mahafoy azy ho an’ny Tompo; nafoy ho an’ny Tompo izy amin’ny andro hiainany rehetra”. Dia niankohoka teo anatrehan’ny Tompo izy ireo.
Vakiteny faha-2: Taratasy Voalohan’i Md Joany Apôstôly (1 Jo 3, 1-2. 21-24)
Ny didy dia ny hinoantsika an’i Jesoa Kristy sy ny hifankatiavantsika.
Ry hava-malala, endrey ity haben’ny fitiavan’Andriamanitra antsika, amin’ny iantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika! Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy mahalala Azy.
Ry hava-malala, zanak’Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika ; fa amin’ny andro hampisehoana izany, dia fantatsika fa hanahaka Azy isika, satria hahita Azy araka ny tena toetrany.
Ry hava-malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia mahazo manatona an’Andriamanitra amin-toky isika. Ary na inona na inona hangatahintsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo imasony isika. Ary izao no didiny: ny hinoantsika an’i Jesoa Kristy Zanany, sy ny hifankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika. Izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao aminy, ary Izy kosa ao aminy; ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika Izy, dia ny Fanahy izay nomeny antsika.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Lioka ( Lk 2, 41-52)
Hitan’ny ray aman-dreniny teo afovoan’ny mpampianatra i Jesoa.
Isan-taona ny ray aman-drenin’i Jesoa dia nankany Jerosalema amin’ny andro fetin’ny Paka; ka nony efa roa ambin’ny folo taona Izy, dia niakatra araka ny fanao amin’izany fety izany izy ireo. Ary nony tapitra ny andro fety ka nody izy, dia nijanona tany Jerosalema i Jesoa Zazakely, nefa tsy fantatry ny rainy aman-dreniny izany. Nataon’izy ireo ho niaraka tamin’ny niray dia taminy Izy, ka nandeha lalana indray andro vao nitady Azy tamin’ny havany sy ny olom-pantany; ary nony tsy nahita Azy, dia niverina tany Jerosalema indray nitady Azy.
Ary nony afaka hateloana, dia hitany tao anatin’ny Tempoly Izy nipetraka teo afovoan’ny mpampianatra ka nihaino sady nanontany azy, ary talanjona izy rehetra nandre Azy noho ny fahendreny sy ny famaliny. Ary nony nahita Azy izy ireo dia gaga, ary hoy reniny taminy: “Anaka, nahoana Ianao no nanao toy izany taminay? Inty irainao sy izaho malahelo mitady Anao”. Fa hoy Izy taminy: “Nahoana no nitady Ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ao amin’ny Raiko Aho?” Faingy tsy azon’izy ireo ny teny nolazainy taminy. Dia niara-nidina taminy nankany Nazareta Izy, ary dia nanaiky azy; fa ireniny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra izany tao am-pony. Ary i Jesoa nitombo fahendrena sy tena, ary nandroso nahatehotia tamin’Andriamanitra sy ny olona.
Alahady faha dimy karemy – 13/03/2016 : Tenin’Andriamanitra